Ifulethi eSarajevo - inhliziyo enkabeni yedolobha. - I-Airbnb
Ifulethi eSarajevo - inhliziyo enkabeni yedolobha.
Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, i-Bosnia ne-Herzegovina
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Marko
Itholakala emgwaqeni omkhulu wedolobha enazo zonke izimpawu zomhlaba ngaphakathi kwebanga elifushane lokuhamba. Imakethe Yeholide YaseSarajevo, kanye namanye amabha apholile kanye nezindawo zokucima ukoma edolobheni kukhona ngaphesheya komgwaqo. Izitolo ezinkulu ezinkulu ziqhele ngamaminithi angu-5 kuphela.
Ifulethi lishiya umbono westudiyo sobuciko, okwakuyinhloso yaso yasekuqaleni emuva ezinsukwini. Ngebha enkulu iyindawo ekahle yokusingatha inkampani futhi ujabulele izikhathi zakusihlwa. Ivulekile ngokwedlulele futhi ikunikeza yonke induduzo oyidingayo.
I-Marijin Dvor noma i-Marindvor iyindawo eseSarajevo eyaziwa ngamabhilidi ayo amahle kusukela enkathini yoMbuso Wase-Austro-Hungarian.
Komakhelwane kunezakhiwo eziningana ezibalulekile; National Museum of Bosnia and Herzegovina, Holiday Inn Sarajevo, UNITIC World Trade Towers, Sarajevo City Center, Greece–Bosnia and Herzegovina Friendship Building (isakhiwo sePhalamende esidala sangaphambi kuka-1992) kanye ne-Alta Shopping Sarajevo, Hastahana Skate Park nezinye.
I-Mosque ka-Ali Pasha - isikhumbuzo esingokomlando sezikhathi zase-Ottoman singaphesheya komgwaqo. Yakhiwa eSarajevo phakathi kuka-1560-61 ngokwesitayela sezakhiwo sase-Istanbul sakudala. Lesi siza sezakhiwo esihle kakhulu esohlwini Lwezikhumbuzo Zikazwelonke zaseBosnia naseHerzegovina.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sarajevo namaphethelo